IBC 2019 တွင် software ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော Visual Storytelling ၏ NewTek Ushers ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » IBC 2019 မှာဆော့ဝဲ-သတ်မှတ်ထားသော Visual ဇာတ်လမ်းတွေ၏ NewTek Usher ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
အိုင်ပီဗီဒီယိုတော်လှန်ရေးသမားအလိုအလျောက်, အဆမဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်အစာရှောင်ခြင်း / လွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းများရှိခြင်းဘို့ခွင့်ပြုသံသယရှိစရာမလိုပါနိုင်ပါတယ် NewTek စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုသူစွမ်းရည်များဆက်လက်တိုးချဲ့မှုအတွက်ဆောငျကွဉျးပေးရန်။ NewTek ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှု၏ကမ္ဘာ့အ reinventing သည်နှင့်အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုကုမ္ပဏီကြီးအများဆုံးဆက်ဆက်နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ဒီအခွက်တဆယ်ကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်မှာစက်တင်ဘာလလယ်ပိုင်းလာ IBC 2019.
1985 ကတည်းက NewTek အသက်ရှင်ထုတ်လုပ်အားဖြင့် IP ကိုဗီဒီယိုကနည်းပညာကဏ္ဍနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုကိုဗီဒီယို tools များအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများများအတွက်အမြင်ပုံရိပ် software ကိုဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ယခုနှစ်တွင် San Antonio တွင်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏၎င်း၏နေအိမ်မြို့အတွက်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ Kansas ပြည်နယ်အမြစ်များထက်ကျော်လွန် သွား. နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏အချက်ပြမီးသဖွယ်အဖြစ်ရောက်မယ့်ဘယ်လိုဝေးပြသခဲ့ပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ 4th, 2019, တွင် NewTek ဒါကြောင့် IP ကိုဗွီဒီယို၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာဏာကိုသရုပ်ပြဘယ်မှာဆော့ဝဲ-သတ်မှတ်ထားသော Visual ဇာတ်လမ်းတွေ၏နယ်စပ်ဒေသအပေါ်သို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
R & D များအတွက်သမ္မတ Vizrt Group က
အဆိုအရ ဒေါက်တာအင်ဒရူးလက်ဝါးကပ်တိုင်၏သမ္မတအဖြစ် Vizrt Group မှအဘို့အ R & Dအဘို့, (မိဘအမှတ်တံဆိပ် NewTek၏), အဓိကမစ်ရှင် NewTek ရန်ဖြစ်ပါသည် "ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတွေကိုအားပေးပါနှင့်၎င်းတို့၏လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့, ရှိုးများကိုဖန်တီးရန်ကပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အောင်နှင့်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရ" လက်ဝါးကပ်တိုင်ကြောင်းထပ်မံပြည်နယ်မှပေါ်သွား၏ "ဒါဟာဗီဒီယိုများ၏အနာဂတ်ဖြစ်တယ်, IP ကိုမသာကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအတွက်စံကြောင်းကိုအစဉ်အဆက်ထက်ထွန်းလင်းဖြစ်၏။ " သူကလည်းကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များနှင့်မည်သို့မည်ပုံသူတို့တစ်ဦးချင်းစီမဆိုအဆင့်ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန့်အလွန်အစွမ်းထက်တစ်ခုခုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အတော်ကြာဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဤအအသစ်များကိုထုတ်ကုန်များအများအပြားပါဝင်သည်:
အဆိုပါ TriCaster 410 Plus အား
အဆိုပါ NewTek Spark Plus အား 4K
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NewTek ပရီမီယံ Access ကိုဆော့ဖျဝဲ, ဇာတ်လမ်းတွေကိုယခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုဟာသူတို့ရဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ပိုကောင်းအောင်ပိုပြီးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် NewTek ထုတ်လုပ်မှုနောက်ဆုံးပေါ်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း features တွေနှင့်အတူစနစ်များ, ဤတိုက်ရိုက်ပုံပြင်ဖန်ဆင်းရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်လွှပုံပြင်ဖန်ဆင်းရှင်ကအလွယ်တကူTriCaster®သို့မဟုတ် VMC1 သို့တပ်ပြီးရှိုး execute ရန်အဘို့အခွင့်ပြုတော်မူသောလုပ်ရပ်များ, များအတွက်အစပျိုးခြင်းနှင့်အတူ Microsoft Word ကိုတစ်ဦး script ကိုတည်ဆောက်ရန်Microsoft®Word®အသုံးပြုသည်။ ပရီမီယံ Access ကိုလည်းအရွယ်မှာNDI®မှတ်တမ်းတင်ပါဝင်သည်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင် / LiveGraphics ပေးပို့, NDI KVM များအတွက်လွယ်ကူသော Multi-ကင်မရာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အပြည့်အဝထပ်တူ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာရှုထောင့်အချိုးများနှင့်ဘောင်နှုန်းထားများနှင့်အတူပြန်ဖွင်, LivePanel, ကြိုတင်ပေး Audio, Virtual PTZ နှင့်ပိုပြီး။
TriCaster စနစ်များထိပ်ဦးစားပေးအဖြစ်အရည်အသွေး, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ထိရောက်မှုထားသောမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များ, များစွာသော set ကိုတက်တွေနဲ့ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာပညာရှင်များတပ်ဆင်။ : ကကဲ့သို့သော feature များနှင့်အတူထိန်သိမ်း-mountable system အဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ်အဖြစ် TriCaster 410 Plus အားမျှမချွင်းချက်ဖြစ်ပါသည်
8 ပြင်ပသွင်းအားစု4M / Es
ဗီဒီယို NDI ပေါင်းစည်းမှု
အဆိုပါ TriCaster 410 Plus အားအပြည့်အဝအကယ်စင်စစ်အနုပညာအောင်ပွဲတစ်ခုလက်ရာဖြစ်လတံ့သောအရာကိုသို့ဗီဒီယိုအားအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ frame ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနှင့်ဖွင့်ရန်လုံလောက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပါရမီမဆိုမီဒီယာအတွင်းအတွင်းအနုပညာရှင်နိုးထဖို့အလားအလာရရှိထားသူဖြစ်သောဆန်းသစ် software ကို-defined နည်းပညာ, စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
NewTek မီးပွား Plus အား 4K
NewTek မီးပွား converters အဖြစ်အမြင်အာရုံ Lossless အဖြစ်ကွန်ယက်ကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်ချိတ်ဆက်ကင်မရာများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များမှတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအသစ်ဖြည့်စွက်ခြင်းမှ 4K ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတက်ကိုပံ့ပိုးသော high-bandwidth ကို NDI device ကိုသော Spark Plus အား™ဖြစ်ပါသည် HDMIစီစဉျ-NDI နီးပါးမျှအောင်းနေချိန်အတူ။ မီးပွား Plus အား devices တွေကိုဘယ်နေရာမှာမဆို network ပေါ်မှာနေတဲ့ 4K ဗီဒီယိုအားအရင်းအမြစ်ဆည်းပူးရန်အသေးငယ်ဆုံး, အမြန်ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒီနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူ, NewTek အမြင်အာရုံဇာတ်လမ်းပြောပြထည့်သွင်းနိုင်သည့်အတွက်နည်းလမ်းများကိုပြောင်းလဲနေသည်။ အဆိုပါ NewTek ပြပွဲတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် IBC2019, ခန်းမ7Booth #C12 မှာ RAI ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ : ကယင်း၏ themes များအဖြစ်ကဲ့သို့သောအပိုဆောင်းဖြေရှင်းနည်းများကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာစက်တင်ဘာလ 13-17 ကနေအမ်စတာဒမ်အတွက်
မီးပွားက IP converter
NVG1 IP ကိုဂရစ်ဖစ်ဆာဗာ
NDI® PTZ ကင်မရာ
အကြောင်းပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် NewTek IBC 2019 မှာ, ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.newtek.com / ibc2019 / ။
အမ်စတာဒမ် CES2017 ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC IBC 2019 ပေါင်းစည်းမှု မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး MStar NewTek SJGolden - SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 Software များ-သတ်မှတ်ထားသော Visual ဇာတ်လမ်းတွေကို လှံ & Arrows စာတန်းထိုး အဆိုပါ NewTek Spark Plus အား 4K အဆိုပါ TriCaster 410 Plus အား TheLive ပုံပြင်ဖန်ဆင်းရှင် TVU ကွန်ယက် 2019-09-05
ယခင်: IUG 2019 တွင် VisLM အတွက် NUGEN အသံသစ်သည် Navigable Alert Solution ကိုပြသခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: Telestream Lightspeed တိုက်ရိုက် Stream & Capture အရှိ New & ထူးခြားသော်ဆောင်မှုများစကေးမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအကြောင်းအရာကယ်ယူ